८४ वर्षीय हजुरआमाको कोरोना अनुभवः ‘संक्रमितलाई प्रेम गरौं’ (भिडियो सहित) | Ratopati
काेराेना जित्नेको कथा
personटुना भट्ट exploreकाठमाडौं access_timeबैशाख २९, २०७८ chat_bubble_outline0
हजुरआमा कस्तो छ अहिले हजुरलाई ?
सोह्रै आना ठिक छु बा म अहिले त । अस्ति अस्ति त खै के के भयो भयो ! मलाई पुरै डाहा छटपटी भयो । सास फेर्न नै सकिनँ । दौडेर बाहिर गएर पोखरीमा डुबुल्की मारु जस्तो भाको थियो ।
४ भाइ छोराको घर वरिपरि छन् । परिवारका १२ जना सदस्यलाई कोरोना संक्रमण भयो । जसमा ५ जनालाई अस्पताल नै भर्ना गर्नुपर्यो । लालकुमारीकी नातिनी बुहारी आस्था क्षेत्री भन्छिन्, ‘नेपालगञ्जका कुनै घर यस्तो छैन होला जहाँ कोरोना संक्रमित नभएको होस् । हाम्रो परिवारका पनि १२ जना सदस्यलाई संक्रमण भयो । बच्चाहरूदेखि ८४ वर्षीय मुमासम्मलाई भयो ।’
विष्ट परिवारका ३/४ जना सदस्यमात्र संक्रमणबाट बचेका थिए । उनीहरु नै संक्रमित १२ जना सदस्यमध्ये कसैलाई अस्पतालमा त कसैलाई घरमै हेरचाह गर्ने गर्थे । लालकुमारी अस्पतालको बेडमा यसरी छटपटाउँथिन् कि मानौं उनी मृत्युसँग भीषण लडाई लडिरहेकी छन् । अक्सिजन लगाइराख्दा पनि उनको अक्सिजन लेबल ८० को हाराहारीमा हुन्थ्यो । बजारमा अक्सिजन र औषधि (रेम्डिसिभिर)को अभाव हुन थालिसकेको थियो । अस्पतालमा बेड खाली थिएनन् । संक्रमितको मृत्यु भएको खबर आइरहन्थ्यो भने बिरामीको चाप र अवस्थाले अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरु त्रसित थिए । त्यस्तोमा बिरामी र बिरामीका आफन्तको हालत त अनुमानमात्र लगाउन सकिन्छ ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको चपेटामा नराम्ररी परेको मध्ये एक हो बाँके जिल्ला । यस क्षेत्रका नागरिक आज अस्पताल र अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाइरहेका छन् भने कति त हतोत्साहित भएर पनि ज्यान गुमाइरहेका छन् । तर, लालकुमारीको आत्मविश्वास देखेर परिवार पनि अचम्ममा पर्ने गर्छ ।
लालकुमारी विष्टलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण हुँदा सास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लाग्ने, जिउ दुख्ने, छटपटी हुनेलगायतका लक्षण देखिए । परिवारका १२ जनासँगै संक्रमित भएकी उनलाई परिवारले यसरी आज उठेर पुनः यो हँसिलो अनुहार हेर्न पाइन्छ भन्ने आशा गुमाइसकेका थिए । तर राम्रो स्याहार सुसार अनि खानपानमा ध्यान दिने र बलियो आत्मबल हुने हो भने कोरोनालाई परास्त गर्न सकिने रहेछ भन्ने उदाहरण आफ्नी मुमा (हजुरआमा) भएको लालकुमारीकी नातिनी बुहारी आस्था बताउँछिन् ।
सुरुमा त लालकुमारीलाई कोरोना संक्रमण भएकै थाहा थिएन । लामो समयदेखि दमको बिरामी भएकाले उस्तै समस्या देखिएको थियो । त्यसैले पुरानै रोग हो कि भन्ने लागेको लालकुमारीलाई । कोरोनाको भयावह अवस्थाले उनमा झनै त्रास फैलिन सक्ने भन्दै परिवारले पनि उनलाई सुरुमा कोरोना संक्रमण भएको पत्तो दिएन ।
तर निको भएपछि परिवारका सबैले खुसी मनाउँदा मात्र लालकुमारीले आफू निको भइसकेको पत्तो पाइन् । भन्छिन्, ‘सुरुमा निकै गाह्रो भयो । अस्पतालमा सबैले राम्रोसँग हेरविचार गरे । निको भएर घर आएपछि सबैले हाम्रो मुमाले त कोरोना जितिस्यो भन्दा म आफै छक्क परेँ । छोरा बुहारी, नाती नातिना बुहारीहरु सबैलाई कोरोना लागेर निकै गाह्रो भएर अस्पताल राखेको रहेछ, मलाई केही थाहै दिएनन् ।’
लालकुमारी भन्छिन्, ‘म त खाएरै निको हुने रोग रछ भनेर जवरजस्ती खान्थे । समय समयमा भगवानको स्तुति गरिरहन्थे । भगवान पछिको ठूलो रक्षक यो संसारमा कोही छ भने त्यो डाक्टर हुन् । डाक्टरहरुको माया र प्रेरणाले म निको भएँ ।’
८४ वर्षीय लालकुमारी र अन्य ४ जनामा गम्भीर प्रकृतिको संक्रमण देखिएकाले कोहलपुर पुर्याउन कठिन हुने ठानेर नजिकको अस्पतालमै सोधखोज गरे । नेपालगञ्जकै यूनाइटेड अस्पतालमा कोभिडका बिरामी लिइरहेको थाहा पाएपछि विष्ट परिवारका ५ जना भर्ना भए । ८४ वर्षीय लालकुमारीलाई कोरोना संक्रमण भएको भन्ने थाहा नदिई उपचार शुरु गरियो भने परिवारका अन्य सदस्यलाई छुट्टै राखेर उपचार सुरु भयो ।
यूनाइटेड अस्पतालकी डा. रजनी शाहलगायतको टिमको निगरानीमा लालकुमारी र उनका परिवारको उपचार भयो । अक्सिजन, रेम्डिसिभिर औषधि सुरु गरेपछि बल्ल लालकुमारीको स्वास्थ्यमा विस्तारै सुधार आउन थाल्यो । लालकुमारीकी नातिनी बुहारी आस्था पूर्व नर्स भएकाले आफैले अस्पतालमा हजुरआमाको स्याहार गरिन् ।
लालकुमारीको सन्देश छ, ‘कोरोना लाग्नबाट बचौँ, यदि लागि हालेमा पनि आत्मबल बलियो बनाऔं । संक्रमितको मनोबल बढाऔं । मेरो परिवारले जस्तै सबैले परिवारमा कसैलाई संक्रमण भयो भने राम्रो रेखदेख गरौं । धेरै नडराऔँ, नआत्तिऔं, सबैलाई प्रेम गरौं ।’
कोरोना जितेलगत्तै सडकमा, भोका जनावरदेखि मानिसको सेवामा